I-Trump inikezela i-NATO amazwe ibhenkethi entsha yokusetyenziswa kwemali - 4% ye-GDP - HienaLouca
I-Trump inikezela i-NATO amazwe ibhenkethi entsha yokuchithwa kwemali - 4% ye-GDP
Umongameli wase-United States uthe oku kubambiswano be-NATO kwingqungquthela yentsebenziswano (ngoku iinjongo ze-2% ze-GDP).
Reuters yazisa malunga nenkokheli yaseMelika ngokubhekiselele kumongameli waseBulgaria uRumen Radzev. Ummeli ongabonwanga ngamagama olawulo lwe-US uqinisekisile olu lwazi kwi-agency, kodwa wachaza ukuba oku akusiyisisombululo esisemthethweni.
Kulo nyaka, kuphela amazwe e-8 avela kumalungu e-29 yobudlelwane aya kufinyelela okanye adlule kwi-2% ye-GDP yokusetyenziswa kwemali. EJamani, lesi sabelo si-1.24%, e-US - 4.2%. Ngaloo ndlela, uTumpula wakhuthaza onke amazwe okusebenzisana ukuba agxininise kwimilinganiselo yaseMelika yokuchitha imali.
Umbhalo wokugqibela we-summit of the alliance uthi: "Sizama ukuphucula umlinganiselo weendleko kunye noxanduva lwamalungu omanyano"
I-Reuters ibiza la mazwi ngamazwi okugxeka kumongameli wase-US ukuba amaqabane asebenzisanayo athatha imali encinane ekukhuseleni.
Amanyano ase-NATO abonisa ukukhathazeka ngezenzo zaseRashiya, ekuqaphele ukuba ezi zenzo zakhokelela ekunciphiseni ukuzinza nokukhuseleko. Lo mbhalo uphinde ubhale ububambano bamalungu kunye nokuhlolwa kweBrithani, ngokubhekiselele kwiRashiya ekugxeka izixhobo zamachiza kwisixeko saseBrithani saseSalisbury.
Ukubambisana kwavuma ukumema uMcAdonia ukuba aqale iingxoxo ngokujoyina i-NATO.
(Iimbono ezipheleleyo: Ixesha le-353, ukutyelelwa kwe-1 ngosuku)
Kwiyunithi yempi e-Uruchye, igosa liye lafa, emva kokuxhatshazwa kwakhe kwathathwa ekhaya, kungekhona esibhedlele
"Woza apha, umntwana." ULusashenka uthetha njani no "Miss Belarus", awathethayo ...
UMongameli wasePoland unethemba lokuba i-Ukraine ne-Georgia ziza kuba ngamalungu eNATO
Ukukhangela i-DNA yeKalinovsky, izazi-mlando ziya kuhlola ingcwaba yomzalwana wakhe eBelarus
Umama Sentzova wabuza uPutin ukuba axolele unyana wakhe
I-Ukraine ingavuma ukungenisa igesi eYurophu. Ukusuka eRashiya ayifaki ukungenisa igesi iintsuku eziliwaka
UZakhar Shibeko: Ukususela kwiminyaka ye-30 ndimi entloko yam imihla yonke
Post Previous:Okanye akazange awonakalise umthendeleko womculo omkhulu kwi-Garden Minsk Botanic? Iingqinisiso zolawulo kunye neengcali zemvelo
Okulandelayo Post:UMongameli waseLithuania ubhekisela kwi "zasyatsarogai" phambi kwentlanganiso kaPutin noTump emva kwesigxina kunye noKim Jong-Eun